Umhlahlandlela Wokwakheka Kwezingxoxo Nge-Chatbot Yakho - Kusuka ku-Landbot | Martech Zone
Ama-Chatbots aqhubeka nokuthuthuka ngokwengeziwe futhi ahlinzeka ngesipiliyoni esingenamthungo kakhulu sabavakashi besayithi kunalokho abakwenzile ngonyaka odlule. Idizayini yokuxoxa kusenhliziyweni yakho konke ukuthunyelwa kwe-chatbot okuphumelelayo… kanye nakho konke ukwehluleka.
Ama-chatbots asetshenziselwa ukwenza i-automation lead capture kanye neziqu, ukuxhaswa kwamakhasimende kanye nemibuzo ebuzwa njalo (ama-FAQs), i-onboarding automation, izincomo zomkhiqizo, ukuphathwa kwabasebenzi nokuqashwa, izinhlolovo nemibuzo, ukubhuka nokubhuka.
Ukulindela kwabavakashi besiza kukhule lapho balindele ukuthola abakudingayo futhi baxhumane nawe noma ibhizinisi lakho kalula uma bedinga usizo olwengeziwe. Inselelo yamabhizinisi amaningi ukuthi inani lezingxoxo ezidingekayo ukuhluza ithuba langempela lincane kakhulu - ngakho-ke izinkampani zivame ukusebenzisa amafomu okuhola ukuzama ukukhetha amathuba abacabanga ukuthi angcono futhi bangazinaki ezinye.
Izindlela zokuhambisa amafomu zinokuwa okukhulu, noma kunjalo… Isikhathi sokuphendula. Uma ungaphenduli kuzo zonke izicelo ezivumelekile ngesikhathi esifanele, ulahlekelwa yibhizinisi. Ngokweqiniso impela, kuyinkinga ngesiza sami. Njengoba kunezinkulungwane zezivakashi ngenyanga, angikwazi ukusekela ukuphendula yonke imibuzo - imali yami engenayo ayikusekeli lokho. Ngasikhathi sinye, noma kunjalo, ngiyazi ukuthi ngiphuthelwa ngamathuba angavela kusayithi.
Amandla weChatbot nobuthakathaka
Kungakho izinkampani zifaka izingxoxo zokuxoxa. Ama-Chatbots anamandla nobuthakathaka, noma kunjalo:
Uma ukhohlisa ukuthi i-chatbot yakho ingumuntu, isivakashi sakho sizokwazi ukukuthola futhi uzolahlekelwa ukwethemba kwabo. Uma uzocela usizo lwe-bot, yazisa isivakashi sakho ukuthi siyi-bot.
Amapulatifomu amaningi wezingxoxo kunzima kakhulu ukuwasebenzisa. Ngenkathi okuhlangenwe nakho kwabo okubhekene nezivakashi kungaba kuhle, ikhono lokwakha nokuhambisa i-bot eliwusizo kuyiphupho elibi. Ngiyazi… Ngingumfana wezobuchwepheshe onezinhlelo futhi angikwazi ukuthola ezinye zalezi zinhlelo.
Izihlahla zezinqumo zokuxoxa kufanele zihlaziywe ngokucophelela futhi zithuthukiswe ukuthuthukisa amazinga wokuguqulwa nge-bot yakho. Akwanele ukushaya i-bot phezulu ngemibuzo embalwa yeziqu - ungahle usebenzise ifomu ke.
Ama-Chatbots adinga ukufaka ukucutshungulwa okuphezulu kolimi lwemvelo (i-NLP) ukuqonda ngokugcwele ukuphuthuma nemizwa yezivakashi zakho, uma kungenjalo, imiphumela iyakhathaza futhi izosusa izivakashi kude.
Ama-chatbots anokulinganiselwa, futhi kufanele ahambise ingxoxo ngaphandle komthungo kubantu bangempela kubasebenzi bakho lapho kudingeka.
Ama-Chatbots kufanele anikeze amaqembu wakho wokuthengisa, wokumaketha, noma wamakhasimende ngemininingwane ecebile ngokusebenzisa izaziso nokuhlanganiswa kwe-CRM noma amasistimu wokusekela amathikithi
Ngamanye amagama, ama-chatbots kufanele kube lula kuwe ukuthi uwasebenzise ngaphakathi futhi ube nolwazi oluhlukile lomsebenzisi ngaphandle. Noma yini engaphansi izosilela. Kuyathakazelisa ukuthi… okwenza i-chatbot iphumelele yimigomo efanayo eyenza ingxoxo iphumelele phakathi kwabantu ababili noma ngaphezulu.
Ubuciko bokuklama nokwenza ngcono ukuxhumana kwe-yoru chatbot nezivakashi kwaziwa njenge ukwakheka kokuxoxa.
Umhlahlandlela Wokwakhiwa Kwezingxoxo
Lokhu infographic kusuka kwaLandbot, ipulatifomu yengxoxo egxile ekwakhiweni kokuxoxa, ifaka ukuhlela, ukubikezela, nokwenza isu elihle lokuxoxa lengxoxo.
Idizayini yokuxoxa kufaka phakathi ukubhala ngamakhophi, ukuklanywa kwezwi nokulalelwayo, ulwazi lomsebenzisi (UX), ukwakhiwa kokunyakaza, ukwakheka kokusebenzisana, nokwakheka okubukwayo. Ihamba ngezinsika ezintathu zedizayini yokukhuluma:
Isimiso Sokubambisana - Ukubambisana okuyisisekelo phakathi kwengxoxo nesivakashi kwenza ukusetshenziswa kwezitatimende ezingachazeki nezinqamuleli zokuxoxa ukuqhubekisela phambili ingxoxo.
Ukuthatha Ukuphenduka - Ukuthatha ukuthatha ngesikhathi esifanele phakathi kwengxoxo futhi isivakashi kubalulekile ekuxazululeni ukungaqondakali nokunikeza ingxoxo ephumelelayo.
Context - izingxoxo zihlonipha isimo somzimba, somqondo, nesimo sesivakashi esithintekayo.
Ukuze uhlele i-chatbot yakho, kufanele:
Chaza izithameli zakho
Chaza indima nohlobo lwengxoxo
Dala i-chatbot persona yakho
Chaza indima yalo yokuxoxa
Ukufeza ingxoxo ephumelelayo phakathi kwebot nesivakashi, kukhona izakhi zomsebenzisi kuyadingeka - kufaka phakathi ukubingelela, imibuzo, izitatimende zolwazi, iziphakamiso, ukubongwa, imiyalo, ukuqinisekiswa, ukuxolisa, izimpawu zenkulumo, amaphutha, izinkinobho, umsindo nezinto ezibukwayo.
Nayi i-infographic ephelele… Umhlahlandlela Wokugcina Wokwakhiwa Kwezingxoxo:
I-Landbot inokuthunyelwe okuningiliziwe okumangazayo kokuthi ungahlela kanjani uphinde usebenzise i-chatbot yakho kusayithi labo.
Funda i-athikili ephelele yeLandbot mayelana nokuklanywa kwengxoxo
Ukubuka konke kwevidiyo yeLandbot
Umhlaba inika amandla amabhizinisi ukuklama okuhlangenwe nakho kokuxoxa nge izakhi ze-UI ezicebile, ezenzakalelayo ukuhamba komsebenzi, Futhi ukuhlanganiswa kwesikhathi sangempela.
Izingxoxo zewebhusayithi ziyi ILandbot's amandla, kepha abasebenzisi bangakha ne-WhatsApp ne-Facebook Messenger bots.
Zama iLandbot Namuhla
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene we Umhlaba.
Tags: lobulunguI-boti-chatbotukwakhiwa kwengxoxoukuhlelwa kwengxoxoingxoxo uiisikhombimsebenzisi somsebenzisi wengxoxoumongoingxoxoukwakheka kokuxoxaisimiso sokubambisanafacebook messengeri-landbot